Qiimayn | Sijaayada Salaada ee My Salah Mat- Siyaad la fahmi karo oo k
Tan iyo markii aan dhalay gabadhayda waxaan la yaabay inta carruur ah ee xogta ka soo qaadata daawashada iyo ee idinku xidhan. Gabadhaydu waa 12 bilood oo kaliya laakiin qalbigaygu wuu dhalaalay maalintii ay ku fadhiisatay sijaayadayda salaadda ee ay sujuuday ka dib markii ay aragtay aniga iyo ninkayga oo tukanayna.
Salaaddu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah diinteenna waana waxa ugu horreeya ee la ina weydiin doono. Waa waxa ay maalinteennu ku wareegayso oo ay ka mid tahay waxyaabaha Alle inagu dhoweynaya. Tani waa sababta ay waalidiin badani ugu dhiirrigeliyaan carruurtooda inay tukadaan iyagoo yar. Waa wax iska caadi ah in carruurtu kaga daydaan waalidkood salaadda markaa maxaad ugu dhiirri -gelin weyday xiisahaas iyo hammigaas iyada oo la baro oo lagu hago inay ku tukadaan sijaayadan aan wali ruqsada haysan ay caruurtu fahmi karaan.
Waxaan ka soo raacay sijaayada salaada ee My Salah Mat barta instagram -ka waxaanan aad u xiiseeyay sijaayadana salaadda sidaa darteed waxaan ku booday fursadan si aan u qiimeeyo.
Gogoshan salaadda waxaa laga sameeyey alaab biyaha iyo dabka adkaysi u leh oo si fudud u laallaabi karo. Waa mid dhalaalaya oo midab leh, taas oo ka dhigaysa inay u muuqato madadaalo iyo soo jiidasho u leh carruurta.
Waxa ku jira 20 luqadood oo kala duwan Ingiriis, Faransiis, Carabi, Turki, Malaysian, Indooniisiyaan, Urdu, Ruush, Bangla, Jarmal, Isbaanish, Holand, Iswiidhish, Noorweey, Bosnian, Talyaani, Boortaqiis, Albaniyaan, Soomaali, Danish. Si fudud u taabo sawirka adduunka si aad u beddesho luqadda. Waxaan u arkay inay tani tahay muuqaal la yaab leh oo ku saabsan badeecad cusub, maaddaama inta badan tahay alaab carruurtu ku ciyaarto oo ay fahmi karto oo ku soo baxday hal luuqad oo keliya.
Waxaa jira 36 furayaal xasaasi ah oo la taabanayo oo carruurta bara dhammaan qaybaha salaadda, laga soo bilaabo Waysada iyo niyada illaa suuradda gaagaaban iyo waxa la akhriyayo tallaabo kasta oo salaadda ah.
Badhamada taabashada ee bannaanka ku yaal ayaa ah tillaabooyinka salaada 2 rakcadood ka kooban, fure kasta oo xasaasi ah oo taabanaya ayaa sharxi doona waxa tallaabo kasta ay tahay, waxay akhrinaysaa weedhaha Carabiga oo waxay u turjumi doontaa Ingiriis (ama luqad kasta oo aad ku adeegsanayso). Tani waa wax weyn maxaa yeelay dadka waaweyn badankoodu ma yaqaanaan macnaha waxa ay ku sheegaan salaadda, u turjumidda Ingiriisiga micnaheedu waa inaad fahantay waxaad sheegeyso taasoo kaa caawineysa inaad ula jeedo waxaad leedahay, taasoo ku siinaysa xiriir aad u xoog badan xagga Alle salaaddaada.
Sida loo isticmaalo Sijaayada
Markaad isticmaalayso sijaayadan markii ugu horeysay waxaan kugula talin lahaa inaad la fadhiisato ilmahaaga (carruurtaada) oo aad riixdo furayaal kasta oo ku yaala hareeraha sijaayada si aad ugu gudubto tillaabooyinka salaadda oo aad fursad u hesho inaad la hadasho oo aad caawiso inay fahmaan talaabo kasta intaadan bilaabin salaada.
Sijaayada waxay leedahay sawirro midabyo dhalaalaya leh si ay u tusaan ilmahaaga meesha ay cagaha dhigayaan bilowga iyo jilbaha, gacmaha, sanka iyo foodda iyada oo salaadda la tukanayo.
Markaad cagahaaga ku istaajiso badhanka cagaha loogu talagalay, salaadda ayaa bilaaban doonta. Waxaa jira xusuusiyaal muuqaal ah oo ku saabsan talaabo kasta oo ku yaala cidhifyada sijaayada kuwaas oo leh sawirro ku saabsan jagada ku xigta. Bilowga (iyo waxay ku xiran tahay da'da ilmahaaga) waxay ku caawin doontaa inaad raacdo qof weyn.
Marka qaybta jirkaagu taabato suufka loogu talagalay, sijaayadah ayaa si toos ah ugu gudbi doonaa tallaabada xigta ee salaadda.
Dhamaadka waxaad riixi kartaa suufka furaha ducada ee sijaayada wuxuuna akhrin doonaa duco gaaban dhamaadka salaaddaada oo ay la socoto turjumaadda Ingiriisiga.
Furaha ducada waxaa kale oo ka mid ah ducooyinka caadiga ah ee maalinlaha ah sida ducada hurdada, soo tooska, gelitaanka masaajidka iwm.
Waxaad si sahal ah u dalaci kartaa codka ama hoos si aad u dhigi kartaa si ay ugu haboonaato baahiyahaaga adiga oo riixaya suufka furaha hadalka.
Ilmahaagu macno ahaan wuxuu u baahan yahay inuu u istaago salaadda oo sijaayada ayaa ku hagi doonta salaadda sida qof weyn oo hagaya oo kor u akhrinaya oo kale.
Sijaayadan salaadda ee caruurta u fudud inay fahmaan waxaa loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 3 sano iyo wixii ka sii wayn.
Maadaama aan ognahay in carruurtu bilaabaan inay kaaga daydaan salaadda sida ugu dhaqsaha badan marka ay socodka ee ay dhaqaaqa karaan, markay 3 jir yihiin ilmuhu wuxuu awoodaa inuu fahmo ereyada fudud, weedhaha iyo inuu bilaabo barashada ducooyinka iyo suuradaha. Waxaan dareemayaa in astaamaha qaarkood ay aad ugu adag yihiin ilmaha jira 3 sano maadaama laga yaabo inaysan fahmin dhammaan ereyada, weedhaha iyo sharraxaadda. Carruurta da'doodu u dhaxayso 3-5 jir fikradayda sijaayadani waxay waxtar u leedahay in la tuso meesha la dhigayo xubnaha jidhkooda laakiin waxay u baahan doonaan kormeer iyo hagida dadka waaweyn ah.
Da'da u dhaxaysa 6 ilaa 7 sano iyo wixii ka sareeya waa da 'ku habboon in loo bilaabo la hadalka iyo sharraxidda tallaabo kasta, tani waa da'da ugu fiican ee ay tahay in ay isticmaalaan astaamaha ku wareegsan cidhifyada sijaayadan.
Sijaayda salaada ee 'My Salah Mat' wuxuu ku yimaadaa sanduuq dhalaalaya, midab leh oo leh xarfo kartoon ah iyo qoraal cad, waxay u egtahay alaabta carruurtu ku ciyaarto waxaanan qiyaasi karaa inay carruurtu ku farxi doonaan inay helaan sijaayadan hadiyad ahaan maxaa yeelay waa mid aad u soo jiidasho leh.
Buugga Waxqabadka oo Bilaash ah
Dhammaan astaamaha sanduuqa waxaa ku jira buug hawleed bilaash ah. Buuggu waa mid tayo sare leh waxaana ku jira cayaaraha xallinta hal-xidhaalayaal la xiriira salaada iyo bogga midabaynta. Waxaa ku jira ducooyin caadi ah, tusaalooyin iyo hage ku saabsan sida loo sameeyo waysada iyo salaada. Waxay u tarjumaysaa dhammaan Carabiga Ingiriisi waxayna aad ugu fiican tahay tixraaca wax kasta oo Salaada la xiriira.
Bogga ugu dambeeya ee buugga waxa kale oo uu muujinayaa sida loo isticmaalo sijaayadan salaadda oo leh sawirro iyo jaantusyo socda.
afaariiqda waa £ 44.99 dadka qaar ayaa laga yaabaa inay dareemaan in qiimuhu xoogaa sarreeyo, hase yeeshe, fikradayda waa qiimo aad u macquul ah maxaa yeelay sijaayadani waa maalgelin. Waa mid waarta oo waligeed jiraysa sidaas darteed waxaa loo gudbin karaa hal ilmo ilaa ka ku xiga mar haddii ilmahaagu barto inuu keligiis tukado. Xusuusnow tani waa maalgelin lagu samaynayo Akhirada ilmahaaga. Markaad sidaas u malaynayso maahan qiimo sare inaad wada bixiso oo aad ka dhigto hadiyad la yaab leh oo siiso.
Maaddaama ay gabadhaydu aad u yar tahay si ay u isticmaasho Sijaayadan waxaan u tegey inaan ku tijaabiyo saaxiibbaday canugteeda 'Safa' oo 3 jir ah. Isla markii ay aragtay sanduuqa midabka leh aad bay u faraxday oo macno ahaan waxay kor iyo hoos ugu boodbooday si farxad leh waxay sugi weyday inay aragto waxa gudaha ku jira oo ay bilowdo isticmaalkeeda.
Markii aan furnay sijaayada oo aan u sharraxnay waxa ay tahay waxay rabtay in ay isla markiiba isticmaasho, sida aan u maleeyay markii hore in badan oo ka mid ah astaamaha sijaayada ayaa aad ugu yara adkaa inay fahamto laakiin waxay jeclayd inay gacmaha iyo cagaha dhigto boosaska loo baahan yahay in la dhigo marka ay sii weynaato, astaamaha kale ee sijaayada waa loo soo bandhigi karaa iyada.
Isla markii ay dul istaagtay sijaayada, iyada oo hagitaankeennii ay bilowday inay raacdo tillaabooyinka, waxaan ogaaday inay ugu wanaagsan tahay in lagu isticmaalo meel isku siman oo adag oo xubnaha jirku waxay u baahan yihiin inay si sax ah ugu beegmaan fureyaasha xasaasiga ah ee taabashada si loo garto inaad u gudubtay tallaabada xigta, marmarka qaarkood ma aysan qaadin tallaabada xigta laakiin markii waxoogaa la hagaajiyay ka dib waxay qaadatay dhaqdhaqaaqii. Tani waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay inaan dhawr jeer furnay oo isku laabannay sijaayada, waxaa lagugula talinayaa inaadan aad u laallaabin gogosha inta ay jabin karto wareegga, waxaa ugu wanaagsan inaad uga tagto guriga intii suurtogal ah ama isku islaabtid sidii loogu laabay sanduuqa.
Miyaan kugula talin lahaa badeecadan?
Waxaan si dhab ah kula talin lahaa badeecadan dhammaan waalidiinta doonaya inay carruurtooda baraan inay u tukadaan si xiiso leh oo ay jecel yihiin halkii ay ka ahaan lahayd shaqo ama cabsi darteed.
Runtii aniga iyo ninkaygu aad baan uga helnay sijaayadan in aan mid ka mid ah u iibsan doonno Safa Ciidda inshaAllah iyo inaan ku idhaahdo waad ku mahadsan tahay ka mid noqoshada qiimayntan. Waxaan ka fekeri karnaa daraasiin qof oo kale inay tan hadiyad ahaan ugu iibsadaan.
Erayga ugu dambeeya
Adduunyada ay tiknoolajigu la wareegeyso hawlaha guryaha, carruurtu waxay aad u xiiseeyaan alaabta carruurtu ku ciyaarto ee is -dhexgalka leh, ee iPadka iyo taleefannada ka falceliya taabashada ama dhaqdhaqaaqa cunugga salaadda waxbarasho ee is -dhexgalka leh waxay dareemi doontaa inay guriga ku habboon tahay. Carruurtu waxay ku raaxaysan doonaan inay ku tukadaan sijaayadan oo iyagoon ogayn waxay baran doonaan inay salaadda tukadaan iyaga oo aan ka dhigayn in ay tahay madadaalo. Waxaan dareemayaa inay ku abuuri doonto jacaylka salaadda carruurta laga bilaabo xiliga ay yaryar yihiin.